Kpido: mbanye ” Martech Zone
Kedụ ka ị si erere akara ika gị na iche iche?
Ịgụ Oge: 2 nkeji Earthbọchị waswa bụ izu a ma anyị hụrụ ọsọ ọsọ nke mgbasa ozi mmekọrịta ebe ụlọ ọrụ kwalitere gburugburu ebe obibi. N'ụzọ dị mwute, maka ọtụtụ ụlọ ọrụ - nke a na-eme otu ugboro n'afọ na ụbọchị ndị ọzọ ha na-alaghachi azụ ahịa dịka ọ dị na mbụ. N’izu gara aga, emechara m ụlọ ọrụ ịzụ ahịa na nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụike. Otu n'ime ihe m kwuru n'ime ogbako ahụ bụ na ụlọ ọrụ ha kwesịrị ịzụ ahịa nke ọma
Ọ Bụghị Ọdịnaya Ọdịnaya Ọ bụla Na-achọ Akụkọ
Wenezdee, Jenụwarị 10, 2018 Mọnde, Jenụwarị 15, 2018 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 3 nkeji Akụkọ n’akụkụ niile, m na-arịa ya. Ngwa mgbasa ozi ọ bụla na-anwa ịtụba ha n'ihu m, ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla na-anwa ịrafu m na akụkọ clickbait ha, ma ugbu a, ụdị ọ bụla chọrọ iji mmetụta uche jikọọ m n'ịntanetị. Biko mee ka ọ kwụsị. Ebumnuche Mere M Ji Agwụ Ike Akụkọ: Ọtụtụ mmadụ dị egwu n’ịkọ akụkọ. Imirikiti ndị mmadụ anaghị achọ akụkọ. Ikwu ọkụ! Amaara m na m ga-ewute ndị ọkachamara ọdịnaya
Tọzdee, Eprel 3, 2014 Tọzdee, Eprel 3, 2014 Douglas Karr
Ịgụ Oge: <1 nkeji A gọziwo anyị na ụlọ ọrụ anyị na mmekọrịta dị ukwuu na ndị ọkachamara na-ahụ maka ịre ahịa ọdịnaya - site na ndị nchịkọta akụkọ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ndị na-eme nchọpụta na ndị na-ede blọgụ, na ndị na-ede akwụkwọ na-edeghị akwụkwọ na onye ọ bụla nọ n'etiti. O were afọ iri iji chịkọta ihe ndị kwesịrị ekwesị ma wepụta oge iji kwekọọ na onye edemede kwesịrị ekwesị na ohere ziri ezi. Anyị echeela echiche maka iwe onye edemede ọtụtụ oge - mana ndị anyị na ha ga - arụ ọrụ dị egwu anyị agaghị achọ
Zụlite Mmekọrịta Gị
Ịgụ Oge: <1 nkeji N'ime ụlọ ọrụ anyị, mmalite mmekọrịta mmadụ bụ ihe achọrọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ndoro-ndoro ochichi na-achọ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta, ị ga-enwe nnukwu netwọk na ọnụnọ n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwukwo na-achọ ọrụ na njikarịcha search engine, m ga-enwe ike ịchọta gị na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha na-achọ ọrụ azụmaahịa, m ga-enwe ike ịhụ ụfọdụ ọdịnaya ama ama na blọgụ gị. Ihe achọrọ